चारआली जङ्गलमा होटल साहुजीको र’हस्यमय मृ’त्यु कारण खुल्यो, भाइ आए मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
चारआली जङ्गलमा होटल साहुजीको र’हस्यमय मृ’त्यु कारण खुल्यो, भाइ आए मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 8, 2021 AdminLeaveaComment on चारआली जङ्गलमा होटल साहुजीको र’हस्यमय मृ’त्यु कारण खुल्यो, भाइ आए मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
बिर्तामोडको गाउँले होटलका सञ्चालक तिलक निरौला चारआली जंगलमा मृ’त अवस्थामा फेला परेका छन । त्यससंगै जङ्गलमा एकाएक मानिसहरुको भिड बढेर प्रहरीलाई समेत अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको थियो ।
रहस्यमय मृ’त्यु भएका तिलक बिर्तामोड मनमोहन हस्पिटल छेउमा रहेको गाउँले होटल संचालन गर्थे । छिमेकीहरुका अनुसार सारै मिलनसार उनी सबैका प्यारा थिए । कसैले नसोचेको भयो भन्दै धेरै चिन्तामा देखिन्थे उपस्थित सबै ।
तिलक निरौला मोटरसाइकल सहित २ दिनअघि देखी बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको रुपमा आएको थियो । खोजी कार्य तिब्र रुपमा गरेको परिवारले कतै भेट्न सकेन । उनको बारेमा मे. ९ प २२०९ नम्बरको साइन मोटरसाइकल सहित निरौला बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो ।
चारैतिर चर्चा चलेको थियो । बिर्तामोड-५ बस्ने निरौलाको श’व जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ला.श जंगलभित्र रहेको र ह.त्या भए नभएको बारेमा अ.नुसन्धान गर्न प्रहरी टोली कुकुर सहित घ’टनास्थल पुगि सकेको र प्रारम्भिक अ.नुसन्धान समेत सुरु भइ सकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
घ’टनास्थलमा पुगेर प्रहरीले घ’टनाबारे थप अ.नुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । श’ब पोस्टमार्टमका लागि पठाइसकेर तिब्र गतिमा अ.नुसन्धान गरिदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज गाउँले होटलमै पुगेर तिलकका भाइसंग विशेष कुराकानी गरिएको छ । उनले घ’टनाको सम्पुर्ण नालीबेली यसरी बताए । थप हेर्नुहोस् भिडियोमा:
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र २६ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल ०८ तारिख
भोलीको रा’शिफल हे’र्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते शुक्रबार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल ०९ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल बैसाख १५ गते बुधबार इ.स.२०२१ अप्रिल २८ तारिख
बेहुलालाई नाच्दा नाच्दै एकाएक यो के भयो यस्तो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)……
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ १३ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २७ तारिख
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,438)